Benchmarks: Kedu ka Webinars gị na-arụ nke ọma? | Martech Zone
Anyị ka na-eme atụmatụ webinar anyị na-esote ụnyaahụ ma tụlee ụfọdụ akara ngosi banyere ịga, nkwalite, na oge… ma m natara nke a taa! ON24 wepụtara mbipụta 2015 nke kwa afọ Webinar Benchmarks Akuko, nke na-enyocha isi ihe ndị a hụrụ na webinars ndị ahịa ON24 n'afọ gara aga.
Webinar arụmọrụ Benchmarks Key Nchoputa
Mmekọrịta Webinar - 35% pasent nke webinars jikọtara ngwa mgbasa ozi mmekọrịta, dị ka Twitter, Facebook na LinkedIn, na pasent 24 nke webinars jiri ntuli aka dị ka ụzọ isi tinye aka na ndị na-ege ntị. Q&A ka bụ ngwa ọrụ mmekọrịta kachasị ewu ewu na 82%.
Webinar Ejiji vidiyo - huru ịrị elu di egwu, site na 9% na 2013 rue 16.5% na 2014, n'ihi mgbanwe nke teknụzụ vidiyo, belata ego, yana ikike ịdabere na vidiyo na-enweghị mgbochi bandwidth.
Webinar Ndị na-ege Webinar - Enweela mmụba pụtara na nnukwu webinars. Na 2013 naanị 1% nke webinars dọtara karịa ndị bịara 1,000, ebe na 2014 9% nke webinars gafere akara 1,000. Mmụba a na-egosi na webinars nke na-adọta ihe karịrị ndị bịara 1,000 anaghịzi akwụsị na mmemme ndị nnukwu ụlọ ọrụ na-ewu.
Nlele Oge - oge ị na-ekiri webinar na-aga n'ihu na-emegide ụlọ ọrụ na-emekarị snackable ọdịnaya nke na-adịrị ntakịrị itinye uche n'ihe. Tụnyere ihe nkezi nke 38 nkeji na 2010, nkezi ndụ webinar ikiri ka nwayọọ nwayọọ bilie na ugbu a na-ejide otu ebe na 56-nkeji akara, na-egosi na webinars na-aga n'ihu na-eto eto dị mkpa dị ka ndị na-azụ onwe ha na-akụzi onwe ha ka ha na-arụ ọrụ maka mkpebi ịzụta.
Oge nlele - Webinars nke emere na Wednesde na Tọzdee nwere ndị bịaranụ, ndị na-esochi ụbọchị Tuesday. Na North America, webinars nwere na 11: 00am PT / 2: 00 pm ET nwere ọnụ ọgụgụ kachasị elu.
Ga na Ndebanye aha - N'etiti 35% na 45% nke ndị na-edebanye aha maka webinars ahịa na-aga ihe omume ahụ. Ntughari mgbanwe a anọgidewo na-adịgide ruo ọtụtụ afọ.
Tags: nkezi oge webinar ogenkezi webinar ogologoON24ịga webinarwebinar abịa vesos ahawebinar na-ege ntị sizebenchmark bench nke webinaroge webinarogologo oge webinarwebinar ahịa benchmarkswebinar arụmọrụ benchmarksarụmọrụ webinarndebanye webinaroke webinarwebinar video ojijiwebinar ụbọchị nleleoge nlele webinar
Rrị elu nke Ahịa Ahịa na 2015